प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ? – Jagaran Nepal
प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ?
प्याजको सेवन गर्न तपाई कति रुचाउनु हुन्छ ? वा सेवनमा धेरै भएको त छैन् ? वा त्यसको बास्ना मन पर्दैन ? वा सेवन गर्न उचित मान्नु हुन्न ? तर प्याजका धेरै उपयुक्तता मध्य एक हो यौ’न क्षेत्रमा बृद्धि ।प्याजले केवल खानालाई मात्र स्वादयुक्त बनाउँदैन प्याजको भोजन अपच तथा खाना नरुच्ने जस्ता समस्याको समाधानमा पनि कामयावी हुन्छ । आहार विशेषज्ञ तथा यौन रोग विशेषज्ञहरुका अनुसार प्याजको सेवनले खानामा रुची त बढाउँछ नै साथै यसले यौ’निक कमजोरी हटाउन पनि सहयोग गर्छ ।